Uye iyi vhidhiyo yemasekondi gumi nemana ndiyo yakatanga iyo Hissgate | IPhone nhau
Kunge gore rega kubva Antennagate yeiyo iPhone 4, iyo iPhone 7 yauya neyayo -gate. "Nyaya" yegore rino yakadaidzwa Hissgate uye raizove dambudziko raizokonzeresa iyo iPhone 7 kana iPhone 7 Plus kuburitsa kuridza muridzo kana processor A10 Fusion iri kushanda nenzira inonetsa. Wekutanga kuridza alarm nezve dambudziko iri yaive YouTube chiteshi 512 Pixels.
Iyo poindi ndeyekuti, mashoma iPhone zvinonyadzisa zvave zvichinyatso kukosha. Kana ndikarangarira nemazvo, ndichibvisa Antennagate neBendgate, izvo zvandisina kutambura kana kuziva nezve chero munhu akatambura, vamwe vese vanga vari kunyunyuta kana kutsamwa kwechinhu chisina musoro (Chipgate?) Tichifunga nezve mutengo weiyo iPhone. Izvo zvinogona kunge zviri izvo neHissgate, a hutachiona kesi iyo isina kugara kwenguva refu iyo yakatanga nevhidhiyo inotevera.
Hissgate: zvese zvakatanga sei
Stephen Hackett akarekodha vhidhiyo iri pamusoro, akaitumira paYouTube uye akashamisika nekukurumidza kwakaita huwandu hwemaonero. Vhidhiyo yakagara chete 14 seconds uye chaicho chiri chimiro chakadzikama chine mutsindo kumashure kweiyo yakakurumbira hiss. Asi ino nguva yakanga isina kumunakira sevazhinji vedu taigona kufungidzira, sezvaanotsanangura mune chinyorwa chaakanyora izvozvi kuti zvese zvapfuura:
Ndiri kufara kuti zvapera zvino. Hazvirevi kuti ndinotenda kuti ndakanganisa zita reApple kana hukama hwangu naApple. Basa rangu nderekutaura nezvezviitiko zvangu ndichishandisa zvigadzirwa zvavo uye kugara mune yavo ecosystem, uye izvo zvingadai zvakandiisa - nevamwe vazhinji - mukusawirirana nekambani nguva nenguva.
Ipo paive kupenga kuona iyo mita ichikwira kumusoro zvakanyanya, izvo zvakauya nemutengo. Kuona mhinduro dzevanhu vaida kundibaya uye kuverenga zvinyorwa zvakabvunza kutendeseka kwangu nekurondedzera zvaiitika nekuzvimiririra kuti ndizvidzivirire Apple nemari yangu zvairwadza.
Zvaive zvese… zvichinetesa. Ndiri kufara kuti yatove kunze kwenhau. Handizvidembi nekuzivisa ruzivo rwangu, asi dai ndaiziva kuti zvinhu zvaizobuda musimba, handina chokwadi kana ndaizove nazvo.
Sekutaura kwaHackett, iyo Hissgate inhoroondo. Varidzi veiyo iPhone 7 kana iyo iPhone 7 Plus havachagunun'una nezvedambudziko iri, nepo vamwe vakanzwa iye zvino mukurumbira hiss vanoti hachisi chinhu chakakomba kudaro, kuti unofanirwa kunamatira nzeve yako kune iyo terminal zvakanyanya uye iyo hiss inowonekawo pane mamwe madivayiri kubva kune imwe mhando isiri Apple. Muchidimbu, zvinoita sekunge ichi hiss chimwe chinhu chakafanana nezvatinogona kunzwa pane chero komputa painenge ichishanda, asi padiki padiki.
Unobvumirana here nevekupedzisira? Wakambotambura here kana kuti uri kutambura kubva kuHissgate uye zvinoita kunge zvisingaite kwauri?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Uye iyi vhidhiyo yechipiri ye14 ndiyo yakatanga iyo Hissgate
Maitiro ekuona rwiyo rwiyo muIOS 10